White kuverenga dawati
Imba Interior Design
Muimba imwe neimwe chikamu chekati chiri dheki. Pasina iyo, kana mumusha kana muhofisi. Tafura yakadaro inongova chinhu chisingaitiki kune munhu wese. Gore roga roga, nyanzvi dziri kuramba dzichivandudza nzvimbo yebasa yevashandisi. Inogona kutengwa mufomu yakagadzirirwa uye yakagadzirirwa kurongeka zvakanakira iwe.
Paunosarudza shambani dzemazuva ano kumusha kana kuhofisi, dhishi dhena rakanaka, iro richakwanisika munenge chero mamiriro ezvinhu. Basa rinoshanda rinofanira kuva rakanaka sezvinobvira, saka zvakakosha kunyatsotarisa nyaya iyi. Pamusana wevashandi vose, dawati rinosarudzwa pachavo, richifunga zvose zvaanoda. Munhu ari kuruboshwe anogona kutenga tafura yakaitwa kunyanya kuvanhu vane ruzivo rwakadai.
Muchena wekunyora dawati unofanira kuitwa nehutano hwehutano. Kubudirira kwahwo kunopiwa nechepamusoro tafura yepamusoro uye kuvimbiswa kwechokwadi. Patafura panofanira kunge kune nzvimbo yezvinhu zvose zvinodiwa panguva yebasa. Kuvapo kwemashalofu uye makabati kunopa nzvimbo yebasa kunyaradzwa uye kurongeka. Kazhinji, mabwendefa ekunyorwa anogadzirwa kubva ku chipboard, uye mativi ayo akachekwa nechepurasitiki.
Basa re dawati rakafanana, asi ukuru uye maitiro anogona kusarudzwa chero. Yakakwana zvakakwana kumusha uye ehofisi kunyora dheki chimiro chechizungu muchena. Tafura yakadaro ichava nyore mune imwe kona isina chinhu, nokudaro kuchengetedza nzvimbo yakawanda muimba kana ehofisi. Chigadzirwa chemakona chinhu chakakosha pamakamuri maduku. Vongai nemhando iyi yefesheni iwe unogona kuwana mukati mechicchi kunyange mudiki.
Kunyora dawati muchena chena
Nzvimbo yakashanda yebasa ndiyo chibvumirano chekunyengera uye kunyaradza. Muvara uyu unonzwisisika nyore nevanhu uye hausi kutsamwisa. Inzwi rhenje rakanaka kune nzvimbo iyo munhu anoshandisa nguva yakawanda mukati mezuva. Dhorogi rekunyora rakachena richazorodza nzvimbo uye rinokurudzira iwe. Zvinotendwa kuti chena ndiyo ruvara rwevanhu vanobudirira. Ane kodzero yekukurudzira vanhu kuti vashande uye kuvashandura kuti vashande.
Dhonge rakanaka rinotarisa dhesi pamwe chete nemamwe mumvuri. Iyi sarudzo inokodzera imba yevana kana kuti vateveri vevasingaenzaniswi nemamiriro ezvinhu chaiwo. Tafura yakachena ichava inonakidza kutamba pamwe chete nemavara akajeka, uye hofisi, asi, nehana dzakanyanya.
Kugadzira chimiro chemazuva ano mukati, mukati mechena denga rakajeka richauya kune rubatsiro, izvo zvichazadza imba yacho nemweya wekare. Glossy Gloss inonzi inosungirirwa, saka tafura iyi inonyanya kukodzera nzvimbo yehofisi.
Chii chandinofanira kubhadhara?
Dhoco recheche rinofanira kuva rakanaka kwazvo. Zvimwewo, nzira inowanikwa pamusoro pekushanda kwepamusoro petafura, zvichienderana nechokufungidzira kwekwenyasi yekambani kunogona kuchinjwa. Kuita kwakadaro kunobatsira zvikuru kune utano hwemashure. Zvakakosha kuziva kuti kushayikwa kwedesi rakanaka kuchakuvadza hutano hwako uye kugadzirisa mamiriro ezvinhu asina kunaka ekushanda. Izvi zvinonyanya kukosha kuvadzidzi nevashandi vehofisi vanopedza nguva yakawanda yenguva yavo vagere patafura.
Kune vacheche zvichave zvakakwana kune davi rekugara, asi kune mwana wechikoro kana mudzidzi patafura ane superstructure yakanaka. Nzvimbo yebasa yakadaro yakagadzirirwa mashefufu, ayo ari pamusoro pekambani. Mabhuku uye mabhuku ane mabhuku ane nzvimbo yakachengeteka uye yakavimbika yekuzvichengeta. Patafura pachava nekurongeka, uye vashandi varo vachava nenzvimbo yakanaka yebasa.
Girazi rakachengetedzeka nemaoko ake - master class
3d mifananidzo pamusoro porusvingo muimba
Mazano eimba yevana
Dema kutambanudza denga
Chandeliers mumutauro weTiffany
Kufuridzira kwemapango nemaoko ako pachako
Nzira yekunyatsokwanisa sei vinyl wallpaper?
Unganidza sei kicheni iwe pachako?
Bhomba chigaro chinogadziriswa
Kudzorerwa kwezvigaro nemaoko
Plasta kune kunze kwemabasa
Nyaya inorwadza nehuro muvana
Kazhinji kutonhora mumakati
Nyeve - Mifambo 2015
ChiBulgaria pepper nekuda kwechando
Chii chokupa mari yemucheka?
Chii chakaitwa kuti chibvise dumbu?
Pancake vhiki: zviratidzo uye tsika
Nzira yekugadzirisa sei kuparara padenga?
Kunwa ndiro dzokurabvu
Ungabvisa sei mukaka wemukaka?
Nzira yekukudziridza intuition?
Kutambadza National Park
Skirts zhizha 2017 - chii chokupfeka munguva itsva?
Macaulay Culkin naMila Kunis
Ndekupi kune caffeine muti kana kofi?
3rd vhiki yekuzvitakura - chii chinoitika?
Kuvimbiswa mumwana - mwedzi miviri
Mwana haatendeuki mumwedzi mitanhatu
Blackberry Bhoots - Kudyara uye Kuchengeta